Lapho ukuhlanza i-gladioli: iseluleko sochwepheshe
Igama lesibili lembali enhle inkemba. Uma ubheka eduze amaqabunga, zibukeka njengezinkemba. Ekuhunyushweni okuvela kwisiLatin "i-gladiolus" kusho "inkemba emfushane".
Iphutha eliyinhloko labalimi
Abalimi abaningi bokuqala bazuza izimbali ezinhle ezitshalweni, kodwa, ngeshwa, ngemuva kokwenza iphutha elilodwa elibi. Baqoqa lonke ulwazi olutholakalayo lwendlela yokunakekela i-gladioli. Zama futhi wenze umzamo omkhulu ukulungisa inhlabathi bese ukhetha izinhlobo, kodwa ungaphutheli iphuzu elilodwa. Lokhu kungenxa yesikhathi lapho ususa i-gladiolus ebusika.
Eziningi zihlukanisa izimbali zibe yizinhlobo zakuqala, zokuvuthwa okuphakathi kanye nezinhlobo eziphuzile, kodwa akubona wonke umuntu owazi ukuthi umbala wesitshalo uphinde uthinte indima ekwakheni nasekuthuthukiseni izilimo eziyizigaxa. Yilokho okwenzekayo nge-gladioli. Ngesikhathi lapho sekuyisikhathi sokuhlanza i-gladioli, khumbula ukuthi izinhlobo ezimnyama zigcwalisa ukwakheka kwe-bulb ngesonto ngaphambi kwezimbali ezine-inflorescences ezikhanyayo. Ngakho-ke, zingadliwa ngenyanga futhi kungabi khona, kungenjalo ukubola kwezilimo eziyizigaxa kungaqala. Isikhathi esivamile sokuvuna i-gladioli ebusika siqala izinyanga ezintathu nesigamu emva kokuphela kwesikhathi sokuqhakaza. Izitshalo, ezitshalwe ezinganeni, ungashiya okugcina.
Nini ukuhlanza i-gladioli: izincomo zabalimi
Khetha usuku olufudumele nolususayo. Ukuze bangalimazi izingane nge-ampu, kufanele bahlolwe ngeforki ngezinyosi ezintathu. Ungasebenzisa ifosholo, kodwa kufanele uhlanza izilimo eziyizigaxa ezweni eliningi, okungenzeki uma usebenzisa amafoloko. Kunoma yikuphi, yonke into ehlwanyelwe yokutshala kufanele isuswe emhlabathini futhi imiswe kancane. Kunconywa abalimi abaningi ngokushesha ngemuva kokuba umbhede ukhethe kuzo izinambuzane, ukuhlinzeka ukusebenzisa le nqubo izidakamizwa ezihlukahlukene (boric acid, potassium, manganese noma i-carbophosic solution nezinye eziningi). Okulandelayo, unqume yonke ingxenye engenhla ye-stem, ushiye isitshalo ngamamentimitha angaphezulu, bese ubeka ama-bulb ekomelweni elinesentimu ngomoya wokushisa ongaphezulu kuka-20 ° C. Inqubo yokumisa ithatha izinyanga ezimbalwa. Ngalesi sikhathi, kubalulekile ukuhlaziya izinto zokutshala izikhathi eziningana ukuze ubone izilimo eziyizigaxa ezigulayo.
Izinyathelo zokuqeda ama-thrips
Uma i-thrips itholakele, isinyathelo esisheshayo kufanele sithathwe. I-corms ekhulelwe ibhujiswa, indawo enempilo emaphaketheni ye-polyethylene, lapho kulungiselelwa khona ukulungiselela okuncane kwe-aerosol kusuka ezinambuzaneni. Iphakheji ngemva kokubopha ngokuqinile futhi ishiywe ihora nehafu. Indlela yesibili, efanelekile ekuqedeni i-parasite, ukubamba izilimo eziyizigaxa imizuzu emihlanu emanzini ashisayo (ngaphezulu kuka-50 ° C) bese uyomisa. Manje kufika isikhathi lapho ukususa i-gladioli kufanele kube ebusika. Uma zingagcinwa esiqandisini (ngezikhwama zamaphepha), zithathwa ngesihlabathi. Nakhu elinye iphuzu elihle kubanikazi bezimbali ezifana ne-gladioli: kanjani ukuwasika, ngaphandle kokulimaza isitshalo. Ngalokhu ungasebenzisa ummese, i-awl. Ukusika kwenzeka endaweni epholile noma ekuseni kakhulu, ebusuku. Sithola indawo emaqabunga, lapho kuvela khona i-spike flower, bese ugoba umgodi kuwo ngokusebenzisa amaqabunga. Khona-ke, kusukela ezinhlangothini zombili, sinquma kuphela isiqu. Amaqabunga asele azovalwa ngaphezu kwendawo yokusika futhi ngeke avumele ukutheleleka noma izifo eziphazamisayo ukungena lapho.
Imoto ukugeza nge ihlumela Poplar ekhaya? Ehlanzekile up iminonjana efihlekile Poplar nge umshini?
Aleksin (Tula esifundeni). City Aleksin (Tula esifundeni): izikhangibavakashi, ukuzilibazisa